Un angelo che scende dal cielo? Non è un fotomontaggio ed è un vero spettacolo | Ilblogdellapreghiera
Otu mmụọ ozi nke si n’eluigwe na-agbadata? Ọ bụghị photomontage ma ọ bụ ezigbo ihe ngosi
Onye na-ese ihe Bekee Lee Howdle jisiri ike nwude n'ụzọ dị ịtụnanya na ọhụụ dị oke egwu "otuto".
Lee Howdle bi na England ma bụrụkwa onye na-ahụ maka nnukwu ụlọ ahịa; n’ụbọchị ndị a, ọ na-elebara mgbasa ozi anya maka oke okike maka eserese. Ogba o tinyere na Instagram otu izu gara aga na-eme njem gburugburu ụwa. Ọ bụ onyonyo siri ike nke zuru oke nke na ọtụtụ chere na ọ bụ photomontage; kama odighi okwu ugha.
Maazị Howdle na-aga ije n'elu ugwu nke Peak District National park, nke dị n'obi England, ọ hụkwara ngosipụta nke ihe nwere ike ịdị ka nnụnụ nke eluigwe mana nke kama ọ bụ mmetụta dị egwu ma dị ụkọ: ile anya Na ala ugwu, na mmiri mmiri, Howdle hụrụ nnukwu silhouette gbara nnukwu agba gburugburu gburugburu. Ọ nọ n'ọnọdụ ziri ezi nwee mmasị na ụdị onyinyo ya nke onyinyo ya, nke ọkụ na foogu gbanwere wee mee ihe ngosi anwansi:
Onyinyo m dị m nnukwu ka ihe egwurugwu gbara m gburugburu. Apụrụ m foto ole na ole ma nọgide na-aga, onyinyo ahụ sooro m ma ọ dị ka mmụọ ozi guzo n'akụkụ m na mbara igwe. Ọ bụ kpokọtara. (site na Sun)
A na-akpọ ihe anya dị egwu a na-akpọ Brocken's Spectrum ma ọ bụ "otuto" ma ọ bụ ihe na-anaghị ahụkebe maka ya. Ka anyị kọwaa ihe merenụ: ọ na - eme mgbe mmadụ nọ n’elu ugwu ma ọ bụ igwe ojii nwere igwe ojii ma ọ bụ igwe mmiri n'okpuru ịdị elu ọ nọ, ọ ga - enwerịrị anyanwụ n'azụ ya; N'oge ahụ, a na-amata onyinyo nke ahụ mmadụ n'igwe ojii ma ọ bụ nsị, nke mmiri ya na-enweta site na ụzarị anyanwụ na-emepụtakwa egwurugwu. Ọ na - eme ugboro ugboro n'ụdị ụgbọelu mgbe ọ na - efegharị.
Aha ihe a si na ugwu Brocken dị na Germany pụta, ebe mmetụta anya pụtara ma bụrụkwa Johann Silberschlag kọwara na 1780. Enweghị nkwado nke sayensị sayensị nke lere anya na - akpalite echiche ndị metụtara ike karịrị nke mmadụ, nke mere na mgbe ahụ Mount Brocken ghọrọ ebe ememe anwansi. Na China, mgbe ahụ, a na-akpọ otu ihe ahụ ihe omume Buddha Light.
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na, mgbe anyị na-ahụ ntụgharị uche nke mmadụ na mbara igwe, echiche anyị na-emeghe nye echiche na-akpali echiche. N'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, ọbụlagodi igwe ojii nke nwere ọdịdị na ọdịdị dị egwu na ọnọdụ ebe ọdachi mere mee ka mmadụ chee echiche banyere ihe ndị dị na mbara igwe nke nyeere enyemaka nke ihe egwu mmadụ aka. N’ezie, a na-eduga mmadụ inwe mmetụta nke inwe mmekọrịta ya na Eluigwe, kama ikwe ka echiche dị ọcha wepụrụ ya - ma ọ bụ nke ka njọ, ịgha ụgha na nkwenkwe ụgha na-enweghị ihe ọ bụla n’ụzọ ime mmụọ - na-anapụ anyị onyinye ahụ dị oke mma nke Chineke nyere anyị. : ihe ịtụnanya.
N'ileghachi anya na ogbugba Howdle dị ka mmetụta dị ọcha dị ọcha anaghị ewepụ ihe ndị pụrụ iche na ọnọdụ ahụ, n'ụzọ dị iche, ọ na-akpọghachite anyị na ezi ọdịdị nke anya zuru oke, nke ga-abụrịrị ihe ịtụnanya. Ọdịda dị mfe nke ìhè anyanwụ na egwurugwu nke agba egwurugwu na-ekele maka ọnụnọ nke oke ọrịre kwesịrị iweghachi echiche anyị na nchọpụta na ihe ọ bụla ewezuga na ụdị mkpụrụ osisi ga-abụrịrị na okike nke Okike.
Enweghị nkwenkwe ụgha, meghee anya gị
Shakespeare kwuru site na Hamlet ya, "Enwere ọtụtụ ihe dị n’eluigwe na ụwa. Nkwenkwe ụgha bụ kpọmkwem ọnyà nke na-egbochi anyị ịhụ eziokwu n'ime ịdị ebube ya dị ịtụnanya. Thingsrọ ihe ịtụnanya, ịbụ ohu nye echiche anyị, na-anapụ anyị ebe Chineke tinyela puku kwuru iji kpọọ anyị: ịtụgharị uche eziokwu na obi dị obosara ma mekwaa ezi obi na-esite na ajụjụ anyị nwere mkpa, mkpa inye Onye Okike aha. .
Ee, ọbụlagodi mmetụta dị egwu nke nwere ihe ịtụnanya, na - ebute echiche nke ihe omimi na ihe ijuanya n'ime anyị nke enweghị ihe ọ bụla gbasara ya na ntinye nke mmụọ. Ọ bụ ihe ịtụnanya na n’ihe gbasara anya anyị na-akpọ “otuto” ihe onye na-ese foto Lee Howdle anwụghị anwụ. Nihi na otuto, nke anyi na ejikọtara ya na nkọwa nke “ama ama,” na-agwa anyị okwu - na-aga nke miri emi - nke ihe nile n’egosipụta. Ọ bụ akara aka anyị: otu ụbọchị anyị ga-aghọta nke ọma onye anyị bụ; ndo nile nke na-ekpuchi anyị n’èzí na n’ime anyị mgbe anyị na-anwụ anwụ, ga-apụ n’anya, anyị ga-anụkwa uru ebighi-ebi nke ịdị ka Chukwu si chee na mbụ. Mgbe ihe uwa kere eke di egwu ma nwekwaa mkpa nke ebube, nlere ya anya bu nkpuru obi.
Ọkachasi nke Dante chọpụtara nnukwu agụụ nke mmadụ, o doro anya na ọ nwara ya n'onwe ya, na mgbe ọ hụrụ onwe ya na-amalite abụ kachasị mara mma, mana nke nwere ike iyi ihe kachasị mma, ya bụ Paradaịs, ọ kụrụ ebube ugbua. n'ime ebe a na ugbua nke eziokwu ụmụ mmadụ. Abụ mbu nke Paradaịs bidoro:
Ebube nke onye na - eme ihe niile
ọ na-aba n’ime ụwa ma na-enwu
akụkụ ụfọdụ na ebe ọzọ.
Ezigbo uri? Okwu na-adabaghị adaba? Gịnị ka ọ pụtara? Ọ chọrọ ịkpọ anyị ka anyị jiri anya nke ndị ọrụ nyocha lee iberibe ohere ọ bụla: ebube nke Chineke - nke anyị ga-anụ ụtọ na ndụ mgbe a nwụsịrị - etinyeworị n'eziokwu nke mbara igwe a; obughi uzo di nkpa ma dokwara anya nke oma - na mpaghara ndi ozo karie ma ozo - enwere odi, onye na akpo. Ihe ịtụnanya anyị na-enweta n’ihu ụfọdụ ihe ịtụnanya eke mmụọ abụghị naanị mmegharị mmụọ nke mmụọ, kama nke ahụ, ọ bụ n ’ọ ga-anabata ọkpụkpọ òkù ahụ Chineke kụrụ n’ime ihe okike ya. Ọ na-adọrọ uche anyị, iji chetara anyị na e nwere ụkpụrụ na nzube maka usoro ederede dị adị. N'ụzọ dị ịtụnanya, n'echiche dị otú a, bụ njikọta megide obi nkoropụ.
isi mmalite nke edemede a na foto https://it.aleteia.org/2020/02/20/angelo-scendere-cielo-foto-brocken-spectre-lee-howdle/
← Na post gara aga Gara aga post:Ngosipụta Padre Pio nye nwa agbọghọ na-ekpe ekpere maka ọbịbịa nke obere nwanne
Ọzọ Post → Post ozo:Nraranye nye Meri na Mee: ụbọchi 8 "onye na - egbu ndu ndu"